Brisbane waa magaalad oo kuyaalo dalka Australia. Waana caasimada gobolka Queensland. Brisbane / (ku saabsan mowqifka dhegeysanaya))  waa caasimadda iyo magaalada ugu badan ee gobolka Australia ee Queensland, 9aadna waa magaalada saddexaad ee ugu badan Australia. Goobta magaalaweynta Brisbane waxaa ku nool dad tiradoodu gaareyso 2.4 milyan, iyo gobolka Koonfur-bari ee Queensland, oo ku yaala Brisbane, waxay ka kooban tahay dad ka badan 3.5 milyan.  Degmada ganacsiga bartamaha ee Brisbane waxay ku taallaa degaanka taariikhiga ah ee Yurub wuxuuna ku yaala gudaha wabiga Brisbane, oo qiyaastii 15 kiilo mitir u jirta afkeeda Moreton Bay.  Meelaha weyn ee magaaladu waxay ku faaftaa dhinac kasta oo ka mid ah daadadka Wabiga Brisbane ee u dhexeeya Moreton Bay iyo Baaxadda Baaxad weyn, oo ku soo jiidata dhowr degmo oo ka mid ah meelaha ugu badan ee dawladaha hoose ee Australia (LGAs) - badi magaalada magaalada Brisbane, inta ugu badan LGA ee ku nool waddanka. Jilicsanaanta Brisbane waa "Brisbanite".
Mid ka mid ah magaalooyinkii ugu da'da weynaa ee Australia, Brisbane waxaa lagu aasaasay dhulalkii hore ee dadka reer Turrbal iyo Jagera. Waxaa loo yaqaan 'Brisbane River' kaas oo ku yaala meeshii uu ku yaal - taas oo markaa loo magacaabay Scotsman Sir Thomas Brisbane, Guddoomiyaha New South Wales laga bilaabo 1821 illaa 1825  - degaanka waxaa loo doortay meel loogu talagalay dambiilayaasha kale ee ka soo jeeda Sydney Colony . Nidaamka ciqaabta waxaa la aasaasay sanadkii 1824, Redcliffe, 28 kiiloomitir (17 mi) waqooyiga degmada ganacsiga dhexe, laakiin si deg deg ah ayaa looga tegey oo u guuray Waqooyiga Quay 1825-kii, isaga oo furay degitaan lacag la'aan ah 1842-kii. dagaalladii u dhexeeya 1843 iyo 1855, iyo horumarinta ayaa qayb ahaan dib loogu soo celiyay dabkii weynaa ee Brisbane 1864, iyo Daadkii Great Brisbane ee 1893. Brisbane ayaa loo doortay caasimad markii Queensland lagu dhawaaqay deegaan gooni ah oo ka timid New South Wales 1859-dii Dagaalkii labaad ee dunida, Brisbane wuxuu kaalin muhiim ah ka qaatay ololaha Allied wuxuuna u adeegay xaruntii Koonfur Galbeed ee Maraykanka ee Douglas MacArthur.
Maanta, Brisbane ayaa si wacan u yaqaan jaangooyooyinka Queenslander ee kala duwan kaasoo sameeyay qaabab badan oo ka mid ah dhismaha magaalada. Waxa kale oo ay dareen ka muujisay dhacdooyinka daadadka waxyeelada, ugu badnaantii 1974 iyo 2011. Magaaladu waa meel dalxiis oo caan ah, oo u adeegta dariiqa gobolka Queensland, gaar ahaan xeebaha Gold Coast iyo Sunshine Coast, goobaha caanka ah ee isla markiiba koonfurta iyo waqooyiga Brisbane. Dhowr dhacdooyin waaweyn oo dhaqameed, caalami ah iyo isboorti ayaa lagu qabtay Brisbane, oo ay ka midyihiin 1982 ciyaaraha Commonwealth Games, World Expo '88, ciyaaraha wacan ee finalka ee 2001, iyo shirkii G-20 ee 2014. Sanadkii 2016-ka, Globalization iyo Network Cities Research Centre ayaa kaalinta Brisbane u ah magaalada Beta aduunka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Brisbane&oldid=214226"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Agoosto 2021, marka ee eheed 07:49.